Ikhaya / Blog / Izinto ezi-5 ezenza itephu enkulu yekhitshi
2020 / 11 / 08 uhleloBlog 1471 0
Uninzi lwabantu, ikhitshi ayisiyondawo yokupheka kuphela. Kwinyani sisebenzisa iikhikhini zethu zokuphumla, ukuxubana, ukucinga. Iikhitshi zangoku zongezwa ngendlela efanelekileyo njengoko kufuneka zithathele ingqalelo imithambo eyahlukeneyo. Okwangoku ababopheleli nje kwizinto esifuna ukuzenza kunye nokuhlamba kodwa ukongeza iiTV, ukugxila kumculo, iishelfu, izinto ezinokwenziwa ngentando yakho kunye nezinye. Amakhitshi ayamangalisa, njengoko kunjalo nezinto abanxibe ngazo.
Kwimeko nayiphi na into, kukho into enye phantse yonke ikhitshi ehamba phambili inayo. Ihlala ngokungaguquguqukiyo apho, ithe cwaka kwaye ayizukisi. Njengomthetho siyabujongela phantsi ubunyani bayo. Nangona kunjalo ayikho enye into enefuthe elikhulu kwindalo yekhitshi lethu.
Umbhobho onesiqhamo onje wowow faucet yenza ikhitshi libukeke lingaqhelekanga kwaye lisebenze kakuhle. Sithanda ukuhlala ixesha elide ekhitshini kwaye sibuyele rhoqo. Okanye emva koko, ngokungalindelekanga, xa itepu iyinto edanisayo, ngekhe siyixabise kakhulu ikhitshi.
Ndenze uphando kwi-Intanethi, ndakhangela kweyona modeli zidumileyo, ndafunda ukuboniswa kwento kunye nophicotho lwabathengi, kwaye ndafumana izinto ezisixhenxe ezenza itephu engafaniyo.
Umbhobho omkhulu wasekhitshini onophawu
Ngokwenyani, andiqondi ukuba kutheni umntu enokuthi aqwalasele itephu engaphawulwanga njengokhetho. Ngaba abantu bacinga ukuba bayasindisa? Yiba nokuba kunjalo, ayichanekanga. Ewe bachitha kakhulu. Iimpompo ezingaphawulwanga zitshabalalisa kungekudala. Bayaphula, bayangena, bayakhulula, bawachitha amanzi kwaye bagcina abanini babo behlala kwaye bachitha inkcitho elungileyo.
Ayisiyiyo kuphela igama esiyihlawulayo. Kukuxhomekeka, inkqubela phambili emitsha eyenziweyo, inkxaso yabathengi ekulungeleyo ukunceda kwithuba elivelayo lokuba singene kwimicimbi, siqinisekise ukuba uninzi lweefompu bubomi bonke. Sindisa isibini semali kwaye uphulukane nazo zonke ezi zinto. Konke kusetelwe?
Kukho ukhetho olubanzi lweemveliso kunye nabenzi abenza iimpompo ezigqwesileyo, ezifanelekileyo nezithembekileyo. Khetha ngokulula enye njengoko kubonisiwe kukungcamla kunye neemfuno zakho. Khumbula nje ukuba "Yenziwe e-China" ayilogama lophawu.
Umbhobho omkhulu wasekhitshini uququzelela kakuhle ngaphakathi ekhitshini
Zonke izinto eziqwalaselweyo, ungafumanisa ukuba le mbono iya kufuneka yehle kumazantsi erundown. Ngaba ukusebenziseka kunye nomgangatho ongagungqiyo ayizizo iimfuno eziphakamileyo kakhulu? Ngokwenene, kunjalo. Nokuba kunganjani na, ukusebenza kunye nokuthembeka kuhlala kuqhelekile kakhulu kwiimpompo ezivela kuzo zonke iimveliso eziqwalaselwayo. Uqwalaselo lufumene enye yezona zinto zibalulekileyo ezithatha isigqibo. Ukuqiniseka ngezinto ezahlukeneyo, ngoku sinokunyamezela ukubona iimpompo ngamehlo ethuthuzelwe ngakumbi kwaye sinike ingqalelo ebonakalayo kwinkangeleko.
Iimilo azipheli. Ngembonakalo ebaluleke ngakumbi, kuyo nayiphi na imeko, iiklasi ezintlanu zinokwamkelwa:
indibaniselwano yezi zimbini zingasentla
Ubume boomatshini obunqamlezayo ubukhulu becala buqukethe imilo ejikelezileyo kunye nomngxunya okanye imilo emile. Ubume bendalo obukhuthazayo buthabatha izityalo kunye nezinto zendalo. Zimbalwa iimpompo, nokuba kunjalo, gqamisa isimbo esingangxengwanga. Rhoqo sidibana ngokudibana kwabo babini.
Iipompo zeRetro zihlala zihamba kwaye zisetyenziselwa iikhitshi zesitayile sexesha ngelixa i-innovator inikwe imixube engalindelekanga yemithombo, imigibe kunye nezinye izinto ezinesibindi kunye ne-frill. Zombini zifuna ikhitshi enxulumene nesitayile kwaye zincinci kakhulu kuzo zonke izinto ezibandakanyiweyo kunemodeli ethe ngqo.
Impompo yasekhitshini engakholelekiyo kunzima ukuyazisa kunye nokusebenza
Ukusekwa akufuneki kuthathe ngaphezulu kwemizuzu eli-10 yomntu onobuchule obubalulekileyo be-DIY, ukutshabalalisa itephu endala engafakwanga. Ngokusisiseko, kukufumana iihoses ngesikhewu esinkini okanye kwinqwanqwa lokugcina amanzi, ukhathalela itephu, uyincamathelise ngaphantsi kunye nokujija kumantongomane (okanye amantongomane) kunye nokudibanisa iinxalenye zeengxoxo kumanzi ashushu nabandayo. . Akusoloko kudlalwa ngokulungiswa, iigasketi ezi-elastic kunye nezinto ezinokuthelekiswa kuba imibutho yangoku ingangeni manzi njengoko ibonakala injalo.
Isibambo siguqula ubushushu kunye nomgangatho womjelo ngokulula nangokuqinisekileyo. Kuyacingeleka ukunxibelelanisa umlambo kuyo yonke indawo isinki kunye nangaphambili.
Kwiipompo ezinentloko eyahlukileyo yokwahlula ithumbu lesilayidi ngaphandle kokuzama. Ayinxibelelani nomzimba wetompu ngaphakathi kwaye isebenza ngokufanelekileyo ngokuqhelaniswa nokwaziswa kwispout. Intloko ye-splash inxibelelana kwakhona nesiqinisekiso, kwaye ayisayi kubakho ukuthanda kwayo ukuba simahla. Ezinye iimodeli zetompu zisebenzisa umazibuthe oqinileyo ukubamba ukuseta kwentloko.
Iipompo ezitshixwayo zihlala zisebenzisa intwasahlobo ebenza babuyele kumnini xa bekhutshiwe. Kwipompo efanelekileyo, intloko yeshawa iya kubuyela kumnini ngaphandle kokudityaniswa ngumntu.
Uluhlu lokujika lubanzi ngokwaneleyo ukubeka ispout kwindawo ethile oyifunayo.
Impompo emangalisayo yekhitshi ayinakho ukukhululwa ebomini
Ishishini elinama-washers kunye nee-gaskets ezinokutshintsha zinendawo yakudala. Iipavini zihambile. Izangqa ezikhutshiweyo nzima, ngoku kwaye zikhuselwe ngamatye axabisekileyo, zenza ukuba iimpompo zazo zonke iinjongo kunye neenjongo kube nzima ukuzinxiba. Azikhuphi konke kubomi bazo bonke, kwaye isiphatho siguqula ubushushu kunye nokuhamba ngokungagungqiyo.
Ipompo engaqhelekanga yasekhitshini inenkululeko evumela nokuba ezona mbiza zinkulu kunye nesikhongozelo zingene phantsi kwayo
Kwimeko yokuba itompu iphantsi, oko akuthethi ukuba kuyothusa. Ngokuxhomekeke kubuninzi besinki usenokuba ukulungele ukubeka iimbiza ezinkulu kakhulu phantsi kwayo kwaye uhlambe. Yiba njalo, ngenxa yokuxinana kwempompo, unokufuna ukuyikhupha endleleni yakho amaxesha ngamaxesha. Ayisiyonto intle, ndiyavuma. Nokuba kunganjani na, kuba kungoku nje emva kwompompo ongaqhelekanga, kunokuba luncedo ukufumana eyona nto iphambili yasekhitshini eza kuhlanjwa phantsi kwale faucet, kwaye ulinganise ukuphakama kwegophe lombhobho kukuvumela ithuba yophuhliso kuwo nawuphi na umcimbi, xa uhlamba ezo zinto zinkulu.
Kwimeko nayiphi na into, qaphela ukuba ungazibaxi izinto. Njengazo zonke iimeko, ingqiqo ngumcebisi onesidima ukongeza apha. Ukuba wena, umzekelo, une griddle enkulu kwaye izinto ezahlukeneyo zininzi kakhulu, ukukhetha itompu yesayizi yesitya kunokuba yinto egqithisileyo.
Ngaphambili :: Yintoni omele uyenze xa uthenga i-Faucet yasekhitshini next: Kutheni i-Faucet yaseKhitshini eyiyo yenza umahluko